दलान नेपाल : के महन्थ ठाकुरले आफनो राजनितीक हत्या गर्लान ?
के महन्थ ठाकुरले आफनो राजनितीक हत्या गर्लान ?
मन्त्रीपरिषदवाट २६ जनाको मनोयनको गृहकार्य चलीरहेको बेला हिजो बुधवार प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर छलफल गरेका छन । उक्त छलफलसंगै ठाकुर २६ को कोटामा मनोनित हुने चर्चा सर्वत्र हुन थालेका छन । यद्यपी ठाकुरले यस बारेमा केही बेलेका छैन । तर तमलोपा भित्रै केही समय देखि यसको वारेमा अडकलवाजी हुदै आएका थिए । ठाकुरको मनोयनलाई कतिपय तमलोपाकै अगुवा नेताहरुले सुनिश्चित भएको बताउदै आएका छन । तर के ठाकुर साच्चिकै २६ को कोटामा मनोयन हुन लागेकै हुन त ? दोस्रो संविधानसभामा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ६ वाट पराजित भएका ठाकुर पहिलो संविधानसभामा पनि मनोनित भएरै सभासद भएका थिए । उनी प्रत्यक्ष तिर पहिलो संविधानसभामा पनि पराजित भएका थिए । दुइ दुई पटक लागातार पराजित हुनु र यस पाली त सम्रग पार्टी नै नराम्ररी पराजित भएको वेला ठाकुर २६ को कोटावाट सभासद मनोयन हुनु कतिको उचित होला उनको राजनितीक भविष्यको लागी ?
दोस्रो संविधानसभामा पार्टी र आफु नराम्ररी पराजय व्योहोरेपछि ठाकुरले पार्टी कार्यलयमा भएको एउटा बैठकमा आफुहरुलाई मधेशी जनताले सदन होइन सडकमा हेर्न चाहेकाले अब आफुहरु सडकमै रहने घोषणा गरेका थिए । पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरु त्यसले उत्साहित भएको देखिएका थिए । तर त्यसको केही दिन नबित्दै यी नेताहरुले ठाकुरजी फेरी २६ मा जान लागेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेको पाइन्थ्यो । खासगरी सुशिल कोईराला प्रधानमन्त्री बन्दा देखि मधेशी पार्टीवृतमा उक्त कुराको व्यापक चर्चा भएको देखियो । जे भए पनि आजको मितीमा सम्रग मधेशी पार्टीहरुको संगै ठाकुरको राजनिती पनि ओरालो लागेको छ र नेतृत्वको वढेको अलोकप्रीयतामा ठाकुर पनि पछाडी छैन । खासगरी समानुपातिक उम्मेदवारीमा भएको गलत अभ्यासे ठाकुरलाई पनि गिजेलेकै छन । सम्धीनी इन्द्र झा देखि केदारनन्दन चौधरी सम्मका लाई सभासद बनाउनाले ठाकुरको राजनितीक उचाईलाई घटाएकै छन ।
मधेश आन्दोलनसंगै नेतृत्वको रुपमा उदाएका उपेन्द्र यादवको असफलता संगै मधेश राजनितीमा नयां नेतृत्वको खाजी भईरहेकै छन । त्यही सन्दर्भ लामो प्रजातान्त्रिक इतिहास बाकेका ठाकुरलाई धेरैले त्यही नजरले हेर्ने गर्थे । र आशाको केन्द्रको रुपमा व्याख्या गर्थे । तर अन्तह उनी पनि असफलताकै वाटोमा गएको विश्लेषण छ धेरैको । त्यसको धेरै कारणहरु हुन सक्ला, प्रथमतह उमेर र स्वाथ्य अवस्था दुवै कारण लगायत अन्य अरु कारणहरु पनि होला । तर पनि ठाकुर आफनो राजनितीको यो अन्तिम कालखण्ड चाहेको भए अत्यन्तै गौरवशाली रुपमा समाप्त गर्न सक्थे । तर आजको मितीमा उनी चुकिसकेका छन । भविष्यको राजनितीक मोड र ठाकुरको अवस्था के होला त्यो त अहिले नै ठाकुवा गरेर भन्न सकिदैन तर ठाकुरको लागी कम से कम अहिले २६ कोटामा मनोयन हुन हानीकारक नै हुनेछ ।
स्वयंममा लामो ईमान्दारिता र स्वच्छ राजनितीको अनुभव बोकेको व्यक्तिको नाम हो महन्थ ठाकुर । र काग्रेस राजनिती त्याग गरेर मधेश राजनितीमा छिर्नुले पनि उनको उचाईले वढाएकै छन । तर उचाईमा पुग्नु संगै त्यसलाई सफलतापुर्वक व्यवस्थापन गर्नु पनि त्यसका लागी त्यतीकै महत्वपुर्ण हुन्छ । ठाकुरको मधेश राजनितीमा आवागमले मधेशलाई धेरै फाइृदा भएको कुरामा कुनै दुईमत छैन । परम्परागत रुपमा रहेका हजारौ मधेशी ततपश्चात सोच्न बाध्य भएकै थिए । जसको जस ठाकुरलाई नै जान्छ । तर गएको ५ बर्षमा मधेशी पार्टीको नेतृत्वको कमजोरीले मधेश राजनिती जुन क्षती व्योहोरेका छन त्यसको अपजस पनि ठाकुर लगायतका मधेशी नेतृत्व प्रति आजको मितीमा छ र आम मधेशी यी नेतृत्व प्रति तीव्र असन्तुष्ट छन । यस्तो बेला ठाकुर पार्टीलाई पुर्नसंरचना गर्दै आम मधेशीको चाहना बमोजीम सडक तिर नरहेर के सदनमा प्रवेश गर्ला ? त्यो उनी स्वयंमले आरोप लगायत काग्रेस र एमाले जो उनकै भाषामा षडयन्त्रपुर्वक उनलाई र उनको पार्टीलाई निर्वाचनमा नराम्ररी पराजीतको नतिजा उनलाई थमाएका थिए । कतिपयको बुझाई यदी ठाकुर यी र यस्ता अनेकन कुराहरुलाई नजर अन्दाज गर्दै यदी २६ कोटाको यात्रामा लम्कीए उनले स्वयंम आफनो राजनितीको हत्या आफैले गर्लान । त्यसमा कुनै दुइमत छैन ।